ट्रेजर लाउन्जका बाउन्सरको दादागिरी, पोखरा घुम्न आएका युवाहरु निर्घात कुटिए – Gandaki Voice
Home/गण्डकी/ट्रेजर लाउन्जका बाउन्सरको दादागिरी, पोखरा घुम्न आएका युवाहरु निर्घात कुटिए
पश्चिम नेपालको धनगढीका चार युवा पोखराको लेकसाइडस्थित ट्रेजर लाउन्ज बारमा निर्घात कुटिएका छन् । उनीहरु सो बारमा कार्यरत बाउन्सरबाट कुटिएका हुन् । उनीहरु अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन पोखरा आएका थिए ।
यो घटना पुस १५ गते राति ३ बजेको हो । घटना भएको १० दिन बितिसक्दासमेत यो घटना गुपचुप छ । यद्यपि प्रहरीले पीडितको उजुरीको आधारमा घटनामा संलग्न दुई जना बाउन्सरलाई भने पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउपर्नेमा स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. ५ का २८ वर्षीय प्रवीन गुरुङ र पोखरा ३१ का २६ वर्षका रोशन गुरुङ रहेका छन् । उनीहरु अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्धामा अदालतबाट म्याद थप भएर बैदाम प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
बारमा कुटिएका उनीहरु तीन जना धनगढी उपमहानगरपालिका वडा ४ चटकपुर र एक जना नेपालगञ्जका हुन् । जसमा १९ वर्षका शशीष हमाल, २४ वर्षका अदित्य हमाल, २४ वर्षकै आयुष हमाल र नेपालगञ्जका २५ वर्षीय आयुष गुप्ता रहेका छन् ।
यीमध्ये आयुष हमाल गम्भीर घाइते छन् । उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको बताइन्छ । आयुषको टाउकोमा पानी जमेको र निको हुन लामो समय लाग्न सक्ने फेवासिटी अस्पतालका चिकित्सक डा. राजन शर्माको भनाई उदृत गर्दै आयुषकी दिदी आरजु हमालले जानकारी दिइन् । अन्य तीन जनाको अवस्था सामान्य रहेको र उपचारपछि घर फर्किएका छन् । आयुषलाई भने शुरुमा पोखराको फेवासिटी अस्पताल, मणिपाल शिक्षण अस्पताल हुँदै काठमाडौंको न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रहरीले बेवास्ता गर्योः पीडित
घटनाको जानकारी पाइसकेपछि तत्कालै घटनास्थल पुग्ने, घाइतेहरुको उद्धार गर्ने र आवश्यक परे उपचारका लागि लैजाने प्रहरीको कर्तव्य हुन्छ । त्यसपछि मात्र प्रहरीले घटनाको जानकारी लिने, अनुसन्धान गर्नेक्रम शुरु गर्छ । तर यस घटनामा पीडितले प्रहरीप्रति थुप्रै गुनासो गरेका छन् ।
पीडित पक्षले घटना भएपछि प्रहरी घटनास्थलमा आएको तर हामीहरुलाई उपचार गर्न जान भनेर फर्किएको दुःखेसो गरेका छन् । उनीहरुले भने, ‘प्रहरी समक्ष अस्पताल जानका लागि गाडीको व्यवस्था गरिदिन भन्दा प्रहरीले आफूहरु व्यस्त भएको भन्दै पन्छिएर हिंडे ।’
त्यसपछि आफूहरु उजुरी गर्न जाँदा भोलि आउन भन्दै पठाएको र भोलिपल्ट पनि जाँदा उजुरी लिन नमानेको पीडितको गुनासो छ । पछि दवावमा मात्रै उजुरी लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरुले बताए । प्रहरीले अझै पनि उनीहरुलाई कार्वाही गर्छ भन्ने विश्वास नलागेको पीडितहरुले बताए ।
वडा प्रहरी कार्यालय वैदामका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) यादव ढकालले घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । गण्डकी भ्वाइससंग कुरा गर्दै डिएसपी ढकालले दुई जना पक्राउ गरिएको र उनीहरुलाई अदालतबाट म्याद थप गरेर अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्धामा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । उनले बाँकी थप कुरा पछि खुल्दै जाने भन्दै अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिलै सबैकुरा भन्न नमिल्ने बताए ।
घटनाको संक्षिप्त विवरण (पीडितहरुको भनाइमा आधारित)
नयाँ वर्षमा पोखरामा सडक महोत्सव चलेको थियो । यही मेसोमा पोखरा घुम्न भनि उनीहरु २० जनाको टोली पुस १५ गते पोखरा आए । पोखराको सेदीबगरस्थित एक होटलमा रुम बुक गरेर बसे । त्यसपछि उनीहरु सडक महोत्सव हेर्न निस्किए । महोत्सव हेरेर ट्रेजर लाउन्ज बारको सिट बुक गरे । उनीहरुले परहेड दुई हजारका दरले सिट बुक गरे ।
त्यसपछि उनीहरु होटल फर्किएर । भोलिपल्ट १६ गते दिनभर सडक महोत्सवमा रमे, फेवाताल लगायतका क्षेत्र घुमे र टिकट लिएर राति बार पुगे । बारमा आआफ्नै ठाउँमा राम्रैसंग रमाए । लगभग उनीहरुले त्यहीं रात बिताउन चाहन्थे । त्यसक्रममा उनीहरुले करिब ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । सोहीक्रममा टिम भित्रैबाट एक जनाले चुरोट र रक्सीको गिलास लिएर मदिराको नसामा नाच चलिरहेको ठाउँमा जान खोजे । उनलाई त्यहाँ रहेका बाउन्सरहरुले रोके ।
यही विषयमा सामान्य विवाद हुँदैहुँदै घटनाले अर्कै रुप लियो । दुबै पक्षको हाना हान नै भयो र त्यहाँ रहेका बाउन्सरले युवाहरुलाई घिर्सादै, कुट्दै गेट बाहिर निकाले । त्यसक्रममा बारमा छुटेका मोवाइल फोन र ब्यागहरु माग्न जाँदा दिइएन ।
घटना भएको हो, अभद्र व्यवहार भएपछि प्रतिकार गर्दा उनीहरु घाइते हुन पुगे : सञ्चालक गुरुङ
यस विषयमा ट्रेजर लाउन्जका सञ्चालक महेन्द्र गुरुङसंग बुझ्दा उनले घटना भएको स्वीकार गरे । उनीहरु (धनगढीका युवाहरु) ले अत्यधिक मदिराको नशामा लाउन्जका कर्मचारी र अन्य ग्राहकहरुसंग अभद्र व्यवहार गर्न थालेपछि सामान्य विवाद भएको र विवाद हुँदै गर्दा घटना हुन पुगेको गुरुङले बताए ।
गण्डकी भ्वाइससंग उनले भने, ‘सामान्य विवाद हुँदै गर्दा उनीहरुको २० जनाको टिम नै आइलाग्न थालेपछि प्रतिकार भएको हो । सामान्य रुपमा प्रतिकार गर्दा उनीहरु घाइते भएका हुन् ।’ उनले यो घटनामा दुवै पक्षको गल्ती भएको स्पष्ट पारे ।
यो घटनापछि पीडितहरुले पोखराप्रति एकदम नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । यो लिंक खोलौं :
पिसटाउन लायन्सद्धारा न्यानो कपड़ा वितरण